फ्लप फिल्म ‘लप्पन छप्पन’ को सिक्वेलमा को को दोहोरिए ? « Khabarhub
फ्लप फिल्म ‘लप्पन छप्पन’ को सिक्वेलमा को को दोहोरिए ?
काठमाडौं – अर्को वर्षको शिवरात्रीको अवसरमा रिलिज गर्ने गरी फिल्म ‘लप्पन छप्पन २’ निर्माणको घोषणा गरिएको छ । निर्देशक मुकुन्द भट्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्म निर्माणको घोषणा गरे ।
‘लामो समयपछि कडा मेहनतका साथ म मेरो प्रोजेक्टसँगै ब्याक भएको छु, मलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’, निर्देशक भट्टले फेसबूकमा लेखेका छन् ।
स्मरण रहोस्, यो फिल्मको पहिलो सिक्वेल असफल भएको थियो । दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, वर्षा शिवाकोटी लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको यो फिल्मको सम्पादन पक्ष त रुचाइएको थियो । तर फिल्मको कथा भने राम्रो नभएको फिल्मले प्रतिक्रिया पाएको थियो ।
फिल्म ‘लप्पन छप्पन २’ लाई निर्देशक भट्टले खतरनाक गेम शुरु हुन लागेको भनेका छन् । फिल्ममा सौगात, दयाहाङ, अर्पण थापा, सुरविना कार्की लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । फिल्ममा अनुपविक्रम शाही पनि जोडिएका छन् ।
फिल्मको कथा, पटकथा र संवादमा पनि निर्देशक भट्ट छन् । ‘लप्पन छप्पन’ मा मुख्य भूमिकामा देखिएकी नायिका वर्षा शिवाकोटी भने यो सिक्वेलमा हुने छैनिन् ।
यस्तै फिल्ममा पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन रहनेछ ।
प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७५, आइतबार ५ : ४१ बजे